Naharifelantsoa Mamitiana, mpanao bilaogy ary mpiaro fatratra ny zon'ny ankizy | UNICEF Madagasikara
Naharifelantsoa Mamitiana, mpanao bilaogy ary mpiaro fatratra ny zon'ny ankizy
Andron'ny bilaogy 2020
Rehefa nahavita ny fianarana teny Frantsay izay nifanindran-dàlana tamin'ny fandalinana serasera ka nazahoany ny marim-pahaizana lisansa taorinan'ny bakalôrea i Mamitiana dia manomana « Master » amin'ny sokajy politika sosialy sy fampandrosoana ny faritra ao amin'ny departemantan'ny sosiôlojia ao amin'ny oniversiten'Antananarivo izy ankehitriny. Izany lalam-pianarana narahiny izany dia mbola nohamafisin’ny fitiavany mandray andraikitra manoloana ireo namana mitovy aminy sy ny fahavononany hitondra ny anjara birikiny amin’ny sehatra ara-piarahamonina. Tsy nisalasala izy nandray anjara tamin'ny fifaninanana bilaogy # Bog4Dev nokarakarain’ny Banky Iraisam-pirenena tamin'ity taona ity na dia tsy nanana fiofanana manokana na traik’efa miavaka momba ny fanaovana bilaogy aza izy. Ny fanolorantenany handray andraikitra amin’ny sehatry ny zon'ankizy sy ny fanabeazam-pirenena, miaraka amin'ny fitiavany manoratra no nanosika azy handray anjara. Satria tsy vaovao taminy loatra ny lohahevitra naroso, dia naneho ny heviny mikasika ilay loha-hevitra izay manan-danja tokoa izy, ka anisan’izany ny fanafoanana ny fanambadiana aloha loatra mba hahafahan’ny vehivavy sy ny zazavavy aty Afrika mahaleo tena: "Ny fifaninanana Blog4Dev dia fomba iray nahafahako maneho ny hevitro sy mizara ny fomba fijeriko momba ilay lohahevitra naroso toy ny hoe “Inona ny vahaolana mba hanafoanana ny fanambadiana aloha loatra any amin'ny firenenao? "
Nohararaotiny io fotoana io mba hanamafisany ny fandraisan’anjarany sy hanaovany fanentanana momba ireo olana izay tena manan-danja aminy. Noho izany, tao amin'ny lahatsoratra nosoratany dia nandefa hafatra mavesatra izy entina hanairana ny fianakaviana, ny sekoly, ny tompon’andraikitra ara-politika, ny fiaraha-monina ary ny olom-pirenena mba hidiran’izy ireo an-tsehatra amin’ny ady amin’ny fanambadian'ny ankizy tsy ampy taona, fa koa mba hampiroboroboana sy hampanajana ny zon'ny ankizy amin'ny alàlan'ny fandraisan’andraikitry ny tsirairay avy.
Te-hampaneno lakolosy fanairana i Mamitiana mba hampitsaharana ny tsy rariny ateraky ny fanambadiana aloha loatra eo amin’ny fiainan’ireo akizy iharan’izany. Tena te hampahalala ny rehetra mihitsy izy fa ny fampanambadiana ankizy, izay heverina ho paikady hivelomana amin’ny lafiny ara-bola, dia misy fiantraikany lehibe ary manimba ny fiainan'ilay zaza. Anisan’izany ny fanesorana amin’izy ireo ny zony, toy ny zo hisafidy na koa ny zo hahazo fanabeazana, izay manakana azy ireo tsy hivelatra, tsy haneho ny zavatra mety ho vitany, tsy hanana ho avy tsara kokoa ary tsy hanana fiainan’olon-dehibe mavitrika.
Ny fandresena tamin'ilay fifaninanana dia fanombohana ihany ho azy, satria niaraka tamin’ireo nandresy tamin’ny andiany 2019 sy 2020 izy dia niditra an-tsehatra mba hitondra ny feon’ny tanora Afrikanina, amin'ny alàlan'ny tambajotran'ny Youth Transforming Africa. Misy ireo fivoriana an-tserasera (webinar), izay anasana ny olom-pirenena rehetra ary indrindra ny tanora, izay karakarain'ilay tranonkala matetika. Notontosaina izany mba hahafahana mifanakalo hevitra sy mitarika fifanakalozan-kevitra mitondra vokatsoa, entina mamaritra miaraka ireo vahaolana mikasika ny lohahevitra manodidina ny fampandrosoana.
Mamitiana nandritra ny fanentanana niaraka tamin'ny ankizy ao anatin'ny tetik’asa "I-beazina"
Ny fandraisan’andraikitra lehibe indrindra izay tanterahany sy ny zavatra tena tiany hafa, araka ny fanazavany dia mikasika ny zon'ny zaza sy ny fanabeazana, indrindra ny fanabeazam-pirenena: «Ny nofinofiko ho an'ny zaza malagasy dia ny hahafahan'ny tsirairay miaina sy mivoatra ao anaty tontolo izay mamela azy hivelatra tanteraka – tontolo izay ahitana fa ny zo hahazo fanabeazana, fialam-boly ary ny zo haneho hevitra dia tsy hijanona ho soratra fotsiny fa ho zo tena izy ho an'ny zazavavy sy zazalahy rehetra, tsy ankanavaka. Azontsika atao tsara ny mamorona izany tontolo izany raha samy manatontosa ny andraikitsika isika, ary indrindra indrindra raha manatanteraka ny anjara asany ny governemanta, anisan’izany ny fanohanana ireo fianakaviana sy ny fampiroboroboana ireo sehatra fanabeazana tsara kalitao, amin'ny alalàn’ny famaliana ireo tena filàn’ny ankizy sy ny zava-misy ankehitriny. »
Izany faniriana izany dia tsy ataony toy ny nofinofy fotsiny fa tena arahiny asa mihitsy amin’ny alalàn’ny fampidirany ny fikambana Liberty 32 – izay anisan’ny andraisany anjara – ao anatin’ilay fandaharan’asa "I-beazana". Tsy inona izany fa tetik’asa mifandraika amin’ny fanabeazana olom-pirenena, fanabeazana ho an’ny fandriampahalemana ary fitantanana natao ho an’ny ankizy marefo. Miely patrana eny anivon’ny distrika samihafa eto Madagasikara izany fandaharan’asa izany. Amin'ny hafanam-po tanteraka no nizaràn'i Mamitiana ny iray amin'ireo zava-bita tsara indrindra tao anatin'izany tetik’asa izany : lahatsary fisoloana vava mitondra ny lohateny hoe "Ankizy mivelatra, olom-pirenena mandray andraikitra". Ilay lahatsary dia miompana amin'ny lohahevitra manodidina ny zon'ny zaza hahazo fanabeazana, fialam-boly ary zo handray anjara, mba hanairana ny tsirairay amin'ny fandraisana andraikitra tokony ho raisiny. Ilay lahatsary dia nalefa voalohany nandritra ny “Rencontres des Films Courts” - andiany faha-14 tao Antananarivo ny volana aprily 2019 teo, avy eo nalefa teny anivon’ireo sekoly miara-miasa amin'ny tetik’asa.
Ary farany, amin'ity andro natokana ho an'ny bilaogy sy mpanao bilaogy ity, ny UNICEF dia miantso ireo tanora hanatevin-daharana ny fikambanana « La Voix des Jeunes ». Sehatra iray amin’ny aterineto izy io, izany hoe bilaogy hahalalàn'ny tanora ireo olana mahakasika azy ireo, ary ahafahan'izy ireo ihany koa maneho ny heviny sy mitondra ny feony any amin'ny sehatra avoavo kokoa, amin'ny alalàn’ny fandefasana ny lahatsoratra soratan’izy ireo.
Ny UNICEF Madagascar manokana, amin'ny alàlan'ny « La Voix des Jeunes », dia namolavola tetik’asa fiofanana ho an'ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga faharoa sy fahatelo avy amin'ireo sekolim-panjakana. Ny tanjona amin’izany dia hampiofanana azy ireo ho lasa mpanao bilaogy misandratra. Tamin'ity taona ity, nohon’ny toe-java-misy ankehitriny nateraky ny covid-19 dia naato ny programa fampiofanana, saingy mitohy kosa ny hetsika bilaogy.
Fampanambadiana ny ankizy